VaMnangagwa Vorapwa kuSouth Africa Mushure Mekuendeswa kuZvipatara Zvakawanda muNyika – 263AfricaNews-Patrick_Manase
Mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vaudza vanhu pamarinda eHeroes Acre nhasi kuti VaMnganagwa vari kurapwa kuJohannesburg uye havasati vadzoka.
Gurukota rinoona nezvehutano, Dr David Parirenyatwa vaudzawo vatori venhau muHarare nhasi kuti VaMnangagwa vave kunzwa zviri nani uye vatombotaura navo parunhare kunyangwe vati vakabva munyika vachirutsa nekuchaya zvakasimba. Vatiwo VaMnangagwa vakaendeswa kuzvipatara zvakawanda muZimbabwe vasati vaendeswa kunze kwenyika.
Mamwe mapepa enhau munyika anoti VaMnangagwa vainge vadya chikafu chine muchetura uye vakatanga kurwara vari kumusangano webato ravo kugwanda nemusi wemugovera.
Asi vachinyora paFacebook page yavo, muzukuru waVaMugabe, VaJason Zhuwao vakaramba mashoko ekuti VaMnangagwa vainge vadya chikafu kubva kuGushungo Holdings icho chinonzi chakapihwa vanhu pamusangano uyu. Ko chii chinokonzera kurutsa nekuchaya.
Munyori mukuru weZimbabwe Medical Association Dr Enock Mayida vanoti pane zvinhu zvakawanda uye panenge pachida kuti paitwe ongororo yakasimba.
← ‘I could school Supa Mandiwanzira’
13 dead in 146 accidents →
Mutungamiri weBotswana VaKhama Vokurudzira VaMugabe Kuenda paMudyandigere
September 21, 2016 c263afri 0